SHIROOTA DANQAA QABSOO TA’AN HUNDA SAAXILUUN DIRQAMA-Halkanoo Badhaasootiin (Qeerroo Biyya keessaa) – Beekan Guluma Erena
SHIROOTA DANQAA QABSOO TA’AN HUNDA SAAXILUUN DIRQAMA-Halkanoo Badhaasootiin (Qeerroo Biyya keessaa)	Beekan Guluma Erena
Politics Category May 18, 2016May 18, 2016OROMO
Shiroota danqaa qabsoo ta’an hunda saaxiluun dirqama
Halkanoo Badhaasootiin (Qeerroo Biyya keessaa)
Haqa walitti himuu dhabuu fi waan hunda iccitii dha jechuun rakkoolee wal xaxoo hoggana qabsoo keenyaa gidduutti uume.Dhugaa isa saba irraa dhokfamuu hin qabne gad baasuun walitti himuun barbaachisaa dha. Qeerroon dargaggeessa humna biyya ijaaruu fi diigullee danda’uudha. Kanaafuu maqaa kana moggoofatanii daldala qarshii diyaaspoora godhuu fi qabatamaan qabsicha tarkaanfachiisuun waan adda addaa ti. Dhugamatti murni amma saaxilame Finfinnee keessatti funyaan waayyanee jalatti ibsa ijjannoo qabsoo hidhannoo calaqisan qofa qilleensa irratti dubbisuun karaa website fi youtube ni maxxansan. Ummanni guutuun fincila deemsisaa ture garuu website isaanii warra beeku miti. Ibsa ijjannoo dubbisuu malee ijjannoon isaan fudhatan oduu gurra guddisuun dubbisuudha. Qabsoo keessatti sobni akeeka qabsoo balleessa. Isaanis kanuma godhaaru. Shagar taa’anii oduu qilleensa irraan dubbisaa nutu qabsoo kanatti abbaa dha jechuun ummata abbaa qabsoo gaggeessaa ture tuffachuudha.
Qabsaa’aa tuffachaa gaggeesaan qabsoo nuyi ofiin jechuun maal akka fakkaatu hunduu haa tilmaamu.Waayyaneen obbo Baqqalaa Garbaa nama akka ambaasaaddara qabsoo nagayaatti laalamu mana isaatii fuute shororkeessuummaa itti maxxansitee hiite sagalee warra funyaan isii jala taa’ee oduu dubbisuuf maxxansuu wallaalte jechuun ofuma mataa ofii sobuudha. Faayida sagalee isaan dubbaatiin argattutu caala waan ta’eef dhiifte. Dargaggeesa meeqatu isaan duuban hidhatti guurame. Odoo dura hin beettu jenneeyyu yeroo maqaan isaanii dirree Facebook guute kana guyyaa jalqabaatiin iddoo isaan jiranii sassaabdi ture. Duuba isaanii boombaan fa’a waan jiruuf harka irra qaban. Kana yoo jennu hin hidhaman jechuu miti. Dubbii karaa maqsuuf boombaa dabalatee garee isaa hidhuu yeroo barbaadanitti ammas hidhuu danda’u. Kanas arguuf teenya. Hedduun namaa yoom akka waayyaneen hidhamu wallaalaaf guyyaa lakkaahachaa jiraata. Isaan funyaanuma waayyanee jalatti sagalee beekamuun qilleensa irraatti ibsa ijjannoo dubbisu.Galgala galgala ammoo Shagar walakkaa Piassa bashananu.Namni basaasaadha jedhamee amma saaxilame Girmaa Xurunee Darsee(Boombaa)n basaasaa ta’uun isaa shakkii in qabu. Keessumattu ergama jaarmiyoota gam-lameetiin(double agent) ta’uun yeroo dheeraa hojjachuun gaaga’ama lubbuu qabsaa’ota hedduu irrattii fi gaaga’ama qabsoo bilisummaa saba keenyaa irratti taasisaa turuun eenyuufuu ifaadha. Kanneen basaasaa ta’uu nama kanaa eega hubatanii hogganoota qabsoo isa waliin hidhata qaban jedhaman irra deddeebiin quba qabaachisanillee odoo itti hin milkaayin hafan hedduun jiraachuun beekamaadha. Kana gochuu isaaniitinis miidhaleen hedduu warri irra gaye akka jiran isaanuma irraa karaalee adda addaa dhagayaa jirra. Qabsoo keessatti waan akkasii ni mudata. Saba keennas hirema kanatu irra ga’e. Kan beekamu qabu garuu qabsoo fuulduraa keessatti qooda fudhatoota akkasiitti sirnaan damaquudha. Shiroota danqaa qabsoo ta’an hunda saaxiluun dirqama. Harka wal irra qabuun danqaa mul’atte dagaagsuudha. Sun ammoo guufuu qabsoo bilisummaa wal irratti kuusuudha. Qabsaa’oota ofiin jechuu dura maalummaa qabsoo beekuun dirqama. Dhuma irratti biyya alaa taa’anii anatu akkas godhe lakki nu’u jechuun hamilee qabsaa’ota biyya keessa warri cabsan dhaabbatanii of ilaaluu qabu. Mata duree tokko irrattis yeroo gubuu hin barbaachisu. Mataa hidhuun bira darbuudha. Amna dheera fuula dura keenya jiru dhiyeessuu irratti halkanii guyyaa hojjachuudha! Boruu Barraaqaa, ilmi dhugaa siif haa dhalatu!
← GOOTICHA OFIRRATTI ALBA’E -Hamzaa Jemal-Waaqni/Rabbi namaa Haa’olchu tkktkt
Yuusuu didee callise- Daawwitee T. →